Waxyaabaha aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan disc AVCHD
Qaybta 1: Waa maxay disc AVCHD ah?
Qeybta 2: Sida loo abuuro disc AVCHD?
AVCHD waa mid ka mid ah asaxaabta ugu wanaagsan ee dhammaan dadka isticmaala kuwa iyagu leh iyo shaqeeyaan ciyaartoyda Bluray sida ay hubineysaa in ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in dadka isticmaala ee ma aha oo kaliya ay heli doonaan natiijada ugu wanaagsan, laakiin sidoo kale awood u yeelan doonaan in la helo natiijooyinka ku jira line shuruudaha ay.
Muhiim in la ogaado
Gubashadii disc AVCHD waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo farsamooyinka ugu horumarsan in la hubiyo in dadka isticmaala ay ka heli disc gubo oo la isticmaalayo tignoolajiyada in heerka yihiin iyo waqti isku mid ah waxa ay sidoo kale waxaa suuragal ah in dhammaan dadka isticmaala sida si ay u helaan wax soo saarka ugu fiican sida ka dhigi lahaa saxannada waxaa ay isticmaalaan ciyaartoyda Bluray keliya iyo ciyaartoyda kale DVD ma awoodi doonaan in ay isticmaalaan disk ah habka ugu wanaagsan ama xitaa ma waxay awoodi doonaan in ay ku isticmaalaan oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in qaab AVCHD yahay qeexitaanka sare oo ahaa wadajir Sony oo Panasonic Corporation ee sanadka 2006 si loo hubiyo in cams ay qeexitaanka sare ma taageersana oo keliya qaab ee iyaga u gaar ah laakiin dadka isticmaala ay sidoo kale awoodaan si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican. Qaab AVCHD waa mid aad u sarreeya in qeexidda iyo qaadataa badan oo meel.
Waa in la ogaadaa in ay jiraan tobanaan kun oo barnaamijyo in lagala soo bixi karo ama loo isticmaalo internetka ah si loo hubiyo in disc AVCHD la gubo oo ka dibna waxa ay sidoo kale waxaa loo isticmaalaa si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican. Waa in la ogaadaa in user ee arrintan la xiriira isticmaali kartaa dhowr khayraadka online si loo hubiyo in arrinta la xalin iyo arrinta guud ee qoraal disk marnaba noqdo madax u user. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee dhamaan kharashyada Waxa lagu talinayaa in la hubiyo in disc AVCHD la gubo oo isticmaalaya barnaamijka MultiAVCHD ah in la soo saaro si loo hubiyo in user helo in natiijada ugu cajiibka leh qasabno oo kaliya dhowr ugu fiican iyo.
Waxaa sidoo kale in la xuso in user ku isticmaali kartaa astaamo sare iyo gobolka adeegyada tahay in lagu gundhig gudahood barnaamijka si uu u sameeyo isticmaalka khayraadka hab fiican iyo waxa ay sidoo kale hubineysaa in user helo natiijada isla. Ugu weyn iyo waxa ugu fiican ee la xiriirta barnaamijkan waa in ay fududahay in la isticmaalo iyo interface uu yahay mid aad is-dhexgal. User xaq u baahan yahay si loo hubiyo in barnaamijka waa ma aha oo kaliya ay maamulaan laakiin habka dhamaystiran waxa kale oo raacay. Hagaha dhamaystiran ee barnaamijka waxaa laga heli karaa URL http://www.afterdawn.com/guides/archive/create_avchd_and_blu-ray_discs_with_multiavchd.cfm oo hagaya dadka isticmaala iyo si aad u hesho natiijooyinka in ay yihiin state of tahay gudahood line waqtiga iyo sida doonista isticmaala. Waxay ka dhigaysa nidaamka of AVCHD gubanaya sahlan tahay in la fuliyo oo ay raacaan sidoo kale sababta oo ah barnaamijka waa la casriyeeyay kooxda horumarka oo aan dib u dhac ah oo labaad oo hal sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in biilasha waxaa lagu daray dib u dhac kasta oo aan iyo arrin. Interface ugu weyn ee laga soo qaaday URL ku xusan waa sida soo socota:
Imgburn ayaa sidoo kale waa barnaamij kale oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in dadka isticmaala ay u isticmaali karaan barnaamijkan, isagoo ah hanuuniye buuxda online waxaa laga heli karaa URL http://www.dvd-guides.com/guides/blu-ray-copy/260-burn-blu-ray -avchd-isticmaalaya-imgburn iyo xabbad ah macluumaadka waa mid aad u fudud in ay raacaan sida Screenshot ka ayaa sidoo kale lagu soo gudahood warbixin ah in lagu meeleeyo ugu URL ku xusan. Barnaamijka waxaa ku dhan helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay dadka isticmaala oo ay hubiso in wax soo saarka ugu fiican waxaa la siiyaa iyaga mar barnaamijkan ayaa loo isticmaali jiray ka dhigi kara. Waxaa sidoo kale in la xuso in dadka isticmaala ay u baahan tahay si loo hubiyo in talaabooyinka kaas oo lagu soo sheegnay ee URL la raacay aan gefo kasta oo iyaga ka mid ah oo ay sidoo kale waa in la ogaadaa in dadka isticmaala ay tahay in ay kala soo bixi barnaamijka link ah ee taas oo uu leeyahay Waxa kale oo la siiyey bogga isla meesha hago ayaa ku yaalla.
Sidaas daraaddeed disk AVCHD waa habka ugu wanaagsan ee loo hubiyo in waxyaabaha ku gubtay si DVD disk iyo arrinta ugu dhaqso badan loo xalin lahaa. Users ayaa waxaa ka mid ah aragtida ah in gaar ah qabanqaabada waa in la sameeyo si loo hubiyo in disc AVCHD la gubo oo laakiin xaqiiqada dhabta ah waa in DVD qoraa fudud oo fudud DVD disk ayaa loo baahan yahay si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo ka gubtay disc AVCHD oo aan wax arrintan iyo dhibaatada. Marka la sameeyo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in DVD waxa loo isticmaalaa sida rabitaan laakiin xadaynta kaliya in user ayaa wajahaya in arrintan la xiriira waa in kaliya ciyaartoyda Bluray noqon doonaa inay isticmaalaan disk ee buuxda awood iyo awoodi doonaan in ay ciyaaro ku jira. In kastoo uu qoray ciyaaryahan DVD caadiga ah user ma awoodi doonaan in ay ciyaari disk la DVD caadiga ah iyo ku takhasusay Bluray DVD ee ay ka mid tahay in ay u adeegaan lahaa ujeedada isticmaalayaasha in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Sida AVCHD waa qaab u baahan in meel bannaan oo sidaas awgeed waa in la ogaadaa in 60 daqiiqo ah AVCHD video baa lagu gubi karaa iyadoo la isticmaalayo DVD caadiga ah marka ay timaado qaab AVCHD. Dhinaca kale ku kordhin ah qaab tani waa .mts iyo .m2ts iyo labada iyaga waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in ay cajalladaha Bluray aan la gubo oo kaliya laakiin sidoo kale ciyaaray isticmaalaya ciyaartoyda gaar ah ayaa waxaa loogu talo galay isku mid. Qaab AVCHD ayaa sidoo kale dhaleeceyn kala users sida oo dhan kaamirada kuwa isticmaalaan kaadhka xusuusta ama ay taageero sida aad kaararka ay ku kharribeen marka ay ku saabsan si aad u hesho buuxa la Xog ama ay horeba u buuxiyeen.
> Resource > Beddelaan > Waxyaabaha aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan disc AVCHD